KDE Mazano 5.65 anouya nezvinopfuura mazana maviri shanduko | Linux Vakapindwa muropa
KDE Mapurani 5.65 anouya nezvinopfuura mazana maviri shanduko
El KDE chirongwa Ini ndinotangisa nyowani nyowani yeayo software suite KDE Mapurani, ine vhezheni nhamba 5.65, ichiunza huwandu hukuru hwekuvandudza, nhau uye kugadzirisa.
KDE Mapurani 5.65 inoitwa pamwedzi yekuvandudzwa kwesoftware iyi inoshandiswa neakakurumbira KDE Plasma graphical nharaunda, uye inouya neshanduko mazana maviri pakati pezvinhu zvakasiyana.
Pakati pezvinhu zvitsva zvinonakidza zveichi chiitiko tinogona kutaura kuiswa kweyekuisa dhairekitori yezvikamu zveystemd, zvidhori zvitsva zveBaloo uye Tsvaga Mukufarira, zviziviso zvemagwaro matsva muKConfig, protocol nyowani yemafaira 7z, gadziriso yenzira mu Android, uye module nyowani yeKQuickCharts.
Munguva pfupi mune yako yaunofarira kugovera
KDE Mapurani 5.65.0 iri kuuya munguva pfupi kune yepamutemo marekodhi eunofarira Linux kugovera, kana iwe uri kushandisa iyo KDE Plasma yekuvandudza nharaunda ita chokwadi chekugadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona. Iyo KDE Sisitimu 5.65.0 sosi kodhi inowanikwa kurodha pasi kana iwe uri mugadziri uye uchida iyo pasuru pane yako Linux kugovera.
KDE Frameworks 5.65.0 inoenderana ne KDE Plasma 5.17, pamwe neQt 5.12 uye Qt 5.13. Kuburitswa kunotevera, KDE Mapurani 5.66, iyo inosvika gore rinouya, ichasvika kuzotsigira KDE Plasma 5.18 LTS iyo ichaburitswa muna Kukadzi 11, 2020.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » KDE Mapurani 5.65 anouya nezvinopfuura mazana maviri shanduko
Malware panzvimbo dzemagasi. VISA inoshora mhando nyowani yekurwisa kwemakomputa